Utshwala bunomthelela ezibalweni zabafayo nokugcwala ezibhedlela - Ilanga News
Home Izindaba Utshwala bunomthelela ezibalweni zabafayo nokugcwala ezibhedlela
MHLELI: Ngiveza izinto eziqeda umndeni nesizwe endlini emnyama. Utshwala bungenisile kithina esivele iningi lethu lingekho emindenini ehlelekile ngokwejwayelekile, ngenxa yomlando wezwe lethu. Utshwala benza umuntu akhohlwe wukuthi ungubani, bunomthelela omkhulu ezibalweni zabafayo nokugcwala kwezibhedlela eNingizimu Afrika. Ukubala kafushane nje imisebenzi yotshwala:
Umuntu ulahlekelwa wumsebe-nzi, kulanjwe emndenini abanye bala-hlekelwa ngamalayisense emisebenzi abayifundele, utshwala kabunandaba nemfundo;
Budala izingozi zomgwaqo, kufe kuphinde kube yizigoga inqwaba;
Buqeda ubuntombi, buqede ubunsizwa (ungangibuzi);
Kunemizi echithekile eminye isikhona nje ngegama;
Bumenza umuntu angazazi, abhede, abanye bazichamele, bazimoshele, bajike bahlukumeze imindeni emakhaya;
Bunomthelela omkhulu ekwandiseni omahlalela nemilutha (amaphara).
Kungani pho sithula ndlu yakithi singawukhuzi umonakalo ezweni lethu sifa sikhona? Nanka amaqiniso engiwaqaphele ngalo mbulalazwe:
Kusukela ngo-2010, kuze kube manje, umabonakude wethu ugcwele izikhangiso zotshwala (ikakhulukazi kuSABC). Kweqa isikhangiso esisodwa kube ngesotshwala, kabukho utshwala obungavezwanga obusemashalofini ezitolo kulesi sikhathi. Kukhishwe lonke uhlobo ngoba phela idubukele imakethe kwelakithi, kodwa sithule. Kulezi zikhangiso kuye kusetshenziswe noma kuvezwe abesifazane nezinsizwa ezisencane, kwezinye kube yizalukazi namakhehla. Muva nje kuvela okungamantombazane abukeka emancane impela, sifelani bakithi sikhona? Isexwayiso sezingane seminyaka engaphansi kuka-18, kasinalusizo uma sekukhangi-swe ngalolu hlobo lokuconcisa amathe kumabonakude ezweni elivele lihleli emnyango ngokokuhleleka kwemindeni. Lempi yomkhankaso wotshwala obhekiswe esizweni sakithi, yaqala ngeminyaka ka-2000, kukhishwa okuthiwa ngama-cider (okumibalabala), kuthengwa noma kuluthwa ngabo ikakhulukazi abasifazane. Manje sekuwuthelawayeka kulo lonke uhlobo lotshwala. Muva nje, kukhishwe okuthiwa kabudaki ungabuphuza nasemsebenzini, sifelani sikhona? Namhlanje kulesi sizukulwane umuntu usezintweni uma ephethe ibhodlela noma ingilazi ephuza bukhoma emphakathini. Namhlanje izindawo zakithi nezindlela zigcwele amabhodlela alo lonke uhlobo okuphuzwe kuwo alahlwa phansi, amanye aphihlizwa emigwaqweni. Uhulumeni wethu uyimbangela yakho konke lokhu ngokuvulela lezi zikhangiso. Uma abaholi belithanda leli zwe, mabasukume baqale ngokuvala zonke izikhangiso zotshwala, ikakhulukazi kumabonakude. Umehluko uzoqala ukubonakala njengoba bekwenzeka ngesikhathi ukhuvethe lungenise ngamandla. Ukuhlupheka akuqali manje kade sasihlupheka, masingazibulali thina nezingane eziyikusasa lethu sibhekile ngokungahleleki nje. Abantu mabaqale eminye imisebenzi, singathi sesisenkululekweni siphinde sizigqilaze thina. Kozwayo ohluphekile, obanjwe yisilingo sotshwala, ngiyakukhulekela, sukuma uyobuchitha ungaphinde ubuthinte ngegama leNkosi uJesu uKristu. INkosi ikusize.
Previous articleKuvela ezimnandi ngonozinti weChiefs
Next articleUfuna usizo umndeni ohlushwa ngamatsheketshe egcekeni